Fomba 15 hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny ecommerce | Martech Zone
Niara-niasa tamin'ny a fivarotana vitamina sy famenony an-tserasera hanampy amin'ny fampitomboana ny zotram-pikarohan'izy ireo sy ny tahan'ny fiovam-po. Nandany fotoana sy enta-mavesatra be ny fifamofoana, saingy efa manomboka miseho ny valiny. Ny tranonkala dia mila refy ary havaozina hatrany ambony. Na dia tranokala niasa tanteraka teo aloha aza izy io dia tsy nanana singa ilaina loatra hananganana fahatokisana sy hanamorana ny fiovam-po ho an'ireo mpitsidika azy.
Ny fivarotanao ecommerce dia mety hamoaka vola amin'ny fomba maro noho ny fantatrao. Ampio ampidiro ny lavaka ao anaty siny, na kely aza izany, ary tazomy ny sanda efa niasa mafy natolotrao ny mpanjifanao! Jake Rheude, Fanatanterahana Stag Mena
Araka ny Baymard Institute, 68.63% -n'ny mpanjifa an-tserasera no mandao ny sarety fiantsenana an-tserasera Misy antony marobe izay hitrangan'izany eo ivelan'ny fibaikoan'ny tranokalanao… fa andao jerena akaiky ny tranokala ecommerce anao sy izay azonao atao momba izany. Ity infographic avy amin'ny Fahatanterahana Stag Mena mamakivaky faritra maro ifantohana. Nanampy vitsivitsy ihany koa izahay!
Ahoana ny fampitomboana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny Internet
Social Media - 84% amin'ireo mpividy an-tserasera no manadihady tranokala media sosialy iray farafahakeliny alohan'ny hanaovana fividianana. Ampitomboy ny fandraisanao anjara amin'ny haino aman-jery sosialy.
Product Videos - Ny fampiasana horonantsary vokatra dia mety hampitombo ny fividianana vokatra 144%!
Accessibility - Na dia tsy laharam-pahamehana loatra aza izany any Etazonia toy ny any ampitan-dranomasina, ny tombotsoan'ny tranonkala azo idirana dia mihoatra lavitra ny mpanjifa manana fahasembanana. Ireo tranonkala azo idirana koa dia haingoina ho an'ny fikarohana organika.
Design - Ireo lalan'ny fiovam-po mazava sy mazava izay hita.
Fanamarihana sy naoty - Ny famerenana sy ny naoty ny vokatra dia manome fampahalalana mitsikera ho an'ireo mpiantsena ka tsy tokony hiala amin'ny tranokalanao izy ireo.
Testimonials - Ilaina ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa, manome valiny amin'ireo mpividy vao haingana izay azon'izy ireo antenaina traikefa ambonimbony kokoa amin'ny orinasanao.
Torohevitra momba ny vokatra - Indraindray ireo mpitsidika dia tsy midina amin'ny pejin'ny vokatra mety, noho izany ny fanomezana azy ireo tolotra mifandraika amin'ny varotra, toy ny vokatra, na ny tolo-kevitry ny mpanjifa dia afaka mampiakatra ny tahan'ny fiovam-po.
Taratasy fiarovana - Asehoy ny badge audit an'ny antoko fahatelo mba hampahafantaran'ny mpitsidika fa miahy ny fiarovana azy ireo ianao.
politika fiarovana fiainan'olona - Ataovy mangarahara amin'ny mpanjifa ny fomba hanarahanao azy ireo sy ny hampiasana ny mombamomba azy.
Payment Options - Manolora PayPal, Stripe, Amazon fandoavam-bola, ary ny carte de crédit rehetra hahazoana antoka fa afaka mandoa ny vola tadiavin'izy ireo ny mpitsidika anao.
Fandefasana - Ankafizin'ny mpividy ny vidiny sy ny fampandrenesana. 28% amin'ireo mpiantsena an-tserasera no handao ny saretiny raha lafo loatra ny vidin'ny fandefasana
Politika famerenana - 66% -n'ny mpanjifa no mamaky ny politikam-bola miverina alohan'ny hanaovana fividianana Ataovy haingana, tsotra ary ao anatin'ny fotoana iray dia hahazo aina ny mpanjifanao!
Zahao hoe - Hizaha toetra ny fizotran'ny fizahana raha te hahalala fa tsotra be izy io. Aza mangataka fanazavana be loatra, tazomy ny pejy natao mazava tsara, ary araho ny fihetsiky ny mpampiasa amin'ny sarintany hafanana mandroso sy ny analytics.
Speed - Ny olan'ny fampisehoana sy ny pejy miakatra miadana dia hanimba ny tahan'ny fiovam-ponao. Manatsara ny hafainganam-pandeha ary handoa onitra izany.
Mobile - Ny fiovam-po amin'ny finday izao dia mitentina 50% mahery amin'ireo tranokala ecommerce an'ny mpanjifantsika. Raha tsy natao hampiasaina amin'ny finday tsara indrindra ianao dia very ny varotra.
Tags: AccessibilityZahao hoetaham-panovanafamolavolanafizahana ecommercetahan'ny fanovana ecommercefamolavolana ecommercemampitombo ny tahan'ny fiovam-pomitombo ny fiovam-poJake Rheudemcommercefifanakalozana findayecommerce findaypage speedpifidiananafahamendrehanatolo-kevitra momba ny vokatrahoronantsary vokatrahoronantsary vokatranaotyFahatanterahana Stag Menapolitika famerenanapolitika famerenanahevitramari-pamantarana fiarovanaFandefasanahafainganam-pandehan'ny tranonkalavarotra media sosialyfiovan'ny media sosialyecommerce media sosialyhafainganam-pandehafijoroana vavolombelona
Dec 22, 2014 amin'ny 8: 19 AM
Nanaiky tanteraka hahazoana fitarihana bebe kokoa ireto teboka ireto dia tena ilaina tokoa. Mila manome zavatra tena tadiavin'ny mpanjifa isika. Eo no hisondrotan'ny tahan'ny fahombiazana.
Dec 6, 2016 amin'ny 3: 36 AM
Lahatsoratra tsy mampino momba ny fiovam-po sy ny varotra. Betsaka ny fampahalalana ho raisina amin'ity. Misaotra betsaka